Muuri News Network » War Cusub oo laga helay Diyaaradii soo dhacday + Ciidanka DF & Amisom oo..
War Cusub oo laga helay Diyaaradii soo dhacday + Ciidanka DF & Amisom oo..
Wararkii ugu dambeeyay ee nasoo gaaraya ayaa sheegaya in Ciidamada Amisom iyo kuwa Dowladda Federalka Somaliya, ay weli u suurageli la’ dahay in ay tagaan deegaanka Cumar Beere ee duleedka Degmada Afgooye, halkaasi oo shalay ay ku dhacday Diyaarad.
Maamulka Gobolka Shabeellaha hoose, ayaa sheegay inay wadaan dadaal ku aadan sidii ciidamada ay ku gaari lahaayeen halka diyaarada ay ku dhacday, balse meel waliba waxaa la sheegay oo loo mari lahaa diyaarada Shabaab inay ciidamo badan dhigeen.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Shabeellaha hoose Maxamed Xuseen Shiine, ayaa Warbaahinta gudaha u sheegay Diyaarada halkii ay ku dhacday inay weli taallo, halkaasina ay maamulaan ciidamada Shabaabka.
Waxa uu sheegay ciidamada inay sameeyeen isku day waliba oo ku aadan inay gaaraan halka diyaarada ay ku soo dhacday, laakiin Shabaab meel waliba ciidan ay dhigeen, isaga oo intaasi warkiisa ku daray goobta diyaarada ay taallo inay u jirto ciidanka dhowr boqol oo tallaabo.
Arinta kale ee sii cusleysay ciidamada inay gaari waayaan halka diyaarada ay ku dhacday ayaa ah roobab xoogan oo ka da’ay Gobolka, waxaana adag gaadiidka inay maraan wadooyinka maadaama ay jirto dhiiqo badan oo ka dhashay roobabkii da’ay.
Dowladda Somaliya ilaa hada si rasmi ah ugama aysan hadlin diyaaradan ku dhacday deegaanka Cumar Beere ee Gobolka Shabeellaha hoose.